Varane, Grealish, Mbappe, Sterling, Ramos, Haaland, Sterling, Pogba & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga – Kooxda.com
HomeSuuqaVarane, Grealish, Mbappe, Sterling, Ramos, Haaland, Sterling, Pogba & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Varane, Grealish, Mbappe, Sterling, Ramos, Haaland, Sterling, Pogba & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
June 23, 2021 Abdiwali Adan Jamac Suuqa, Wararka Maanta 0
Kooxda chelsea ayaa Man City kula tartami doonta saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Jack Grealish (Football Insider).
Xiddiga reer France ee Kylian Mbappe ayaa maamulka kooxdiisa u gudbiyay warqada Bixitaanka isaga oo doonaya in uu isaga tago kooxda suuqa xagaagan (RMC Sport).
Xiddiga garabka uga ciyaara Man City ee Raheem Sterling ayaa iska diiday in uu ku biiro kooxda Arsenal kadib markii ay Gunners dhigeeda Man City wax ka waydiisay helitaanka xiddiga (ESPN).
Kooxda chelsea ayaa isku dayi doonta in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara Villarreal ee Gerard Moreno hadii ay ku fashilmaan saxiixa Erling Haaland (Fichajes).
Kooxda Real Madrid ayaa ka wal-walsan in uu xiddiga Raphael Varane haatanba heshiis la gaadhay kooxda Man United xilli ay Red Devils isku diyaarinayso in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga (Metro).
Xiddiga Sergio Ramos ayaa Asxaabtiisa ku dhaw u sheegay in uu ku biiri doono kooxda PSG isaga oo iska diday kooxaha Man United iyo Man City (AS).
Kooxda Arsenal ayaa diyaar u ah in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga Philippe Coutinho laakiin waxa ay ku xidhay shardi ah in uu muujiyo taam ahaanshihiisa (Sport).
Kooxda Liverpool ayaa gabi ahaan isaga hadhay xiisihii ay u qabtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Borussia Monchengladbach ee Florian Neuhaus (Liverpool Echo).
Kooxda Arsenal ayaa ku sii dhawaanaysa dhamaystirka saxiixa xiddiga daafaca dhexe uga ciyaara kooxda Brighton ee Ben White (Sun).
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay diidi doonto heshiis isku badalasho ah oo ay Man United u soo bandhigayso saxiixa xiddiga paul Pogba si ay u hesho saxiixa daafaca Raphael Varane (Mirror).
Kooxda Liverpool ayaa rajaynaysa in ay suuqa xagaagan dhamaystirto saxiixa xiddig khadka dhexe ah inta uu furanyahay suuqa xagaagan (Mirror).
Kooxda Arsenal ayaa bilowday in ay diyaariso in ay iska iibiso xiddiga Alexandre Lacazette si ay ugu dhaqaaqdo saxiixa xiddiga kooxda Everton ee Dominic Calvert-Lewin (Telegraph).
Xiddiga u ciyaara xulka qaranka Croatia ee Josko Gvardiol ayaa qirtay in uu doonayo in uu ku biiro kooxda Liverpool (Star).
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee Kingsley Coman ayaa doonaya in uu kooxdiisa ku qabso in ay ka iibiso kooxda Man United suuqa xagaaga (Sun).
Sii Akhriso: Kulanka Sariirta: Faa’iidada Ugu Weyn Ee Kulanka Sariirta Oo Daraasad Lagu Ogaaday.
Xulka Spain Oo Xasuuqay Slovakia & Sweden Oo Garaacay Xulka Poland Kaalinta 1-aadna Kaga Soo Baxay Group-ka
Cristiano Ronaldo Oo Talaabo U Qaaday Ku Biirista Kooxdiisa Cusub, PSG Mise United?